my day မှာတင်လိုက်တဲ့ စုံတွဲပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝန်ခံလာတဲ့ စည်သူမောင် – အနုပညာရပ်ဝန်း
ပရိသတ်ကြီးရေ လတ်တလောမှာတော့ တစ်ခေတ်တစ်ခါက music video တွေမှာ အမြဲလိုလို တွေ့မြင်ခဲ့ရသလို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေလည်းအများကြီး ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်စည်သူမောင် ရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားနေကြမယ်ထင်ပါတယ်နော် ..။ မကြာသေးမီကမှ မိုင်ဒေးမှာ တင်ခဲ့တဲ့ စုံတွဲပုံကြောင့် စည်သူမောင်တစ်ယောက် ချစ်သူရနေပြီလားလို့ ပရိသတ်တွေ ထင်ကြေးပေးခဲ့ကြပါတယ် ။
စည်သူမောင်ကတော့ သူတင်ခဲ့တဲ့ မိုင်ဒေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ” မနေ့က ?? ????? မှာ ပုံလေးတင်လိုက်တယ် တချို့ကလာမေးကြတယ် တချို့က react တွေပေးကြတယ် အမှန်တော့ “ နင်ကပစ်လေ_ငါကချစ်လေ “ ??? ကအမှတ်တရပုံလေးပါ ?? ????? ကိုစိတ်ဝင်စားသလို ??? လေးထွက်လာရင်လည်း အားပေးကြဦးနော် ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ MTV ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေကို ဝန်ခံပြောကြားလာခဲ့ပါတယ် ။
ဒီသီချင်းလေးကို တေးရေး ဟဲလေး ကရေးသားထားပြီး မာန်က သီဆိုထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် ။ ဒါရိုက်တာ စိုးကိုကိုစိုးက ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားပြီး သရုပ်ဆောင်ကတော့ ပြည့်ဝတီနဲ့ စည်သူမောင်တို့က ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ စည်သူမောင်က နောက်ထက်လည်း ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာတွေ အများကြီးလာတော့မှာမို့ စောင့်မျှော်ပေးပါဦးလို့ ပရိသတ်တွေကိုတောင်းဆိုထားပါသေးတယ် ။credit